जसलाई आफैंले जितेको १५ स्वर्णले गिज्याइरहन्छ ‘प्रशिक्षक राजनीतिमा लाग्दा गुम्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता’
सराेज तामाङ बिहीबार, असार १८, २०७७, १४:३३
काठमाडौं- खेलाडीको सफलता र असफलता मापन हुने जति पनि आधारहरु छन् ती सबैमा राजु राई उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। राजुको खेल र उनले पाएका उपलब्धीहरु लोभलाग्दो छ। खेलाडी र दर्शकका लागि उनी आदर्श पात्र हुनुपर्ने हो। तर, अहिले आफ्नै उपलब्धीहरुले आफै थिचिएको महसुस गरिरहेका छन्।
जिम्न्यास्टिक खेलाडी राजु हिजोआज टोलाइरहन्छन्। बाहिरी हाँसोले भित्री मन दुःखेको छोप्न सकेका छैनन्। हाँस्दा हाँस्दै पनि रोइरहन्छ मन, सम्झनाले पिरोलिएर। सफलतामा उचो बन्नुपर्ने एक खेलाडीलाई खेलकै कारण यस्तो भइरहँदा मनमा के बित्दो हो?
के छ भनेर सोध्दा राजु पनि भनिदिन्छन्- ‘म सन्चै छु अनि तपाइँलाई?’ तर राजु ठीक छु भनेर आफैलाई ढाँटिरहे पनि सबै ठीक बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
जिम्न्यास्टिक खेलले राजुलाई यस्तै बनाएको छ। हाँसिरहेका मन अचानक दुख्छ। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सर्वाधिक सफल खेलाडी किन विरहमा परिरहेका छन् त?
यो उनको व्यथा पछाडिको दोष कसको हो? सक्दो मेहनत गरेर उपलब्धी पाउँदा पनि उनी किन गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्?
राजु मात्रै होइन नेपालमा जिम्न्यास्टिकमा लागेका सबै खेलाडीको अवस्था यस्तै हो। कोही चिन्ता बोकेरै बसिरहेका छन्, कोही खेल छाडेर पलायन भइसके।
२२ वर्षका राजुलाई खेलाडी हुँ भन्दा त गर्व लाग्छ नै। तर संघ, प्रशिक्षक तथा सरकारबाट अपहेलित हुनु पर्दा पीडाले छाती चिरिन्छ। कटक्क मन खान्छ। सातौँ, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र प्रथम लुम्बिनी जिम्न्यास्टिक जस्ता हरेक प्रतियोगिताका विभिन्न विधामा पाँच स्वर्ण गरेर राजुले १५ स्वर्ण जितिसके। तर अहिले उनलाई तीनै स्वर्णले गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ।
प्रशिक्षकको राजनीतिक धन्दाले चुडिएको सपना
हरेक खेलाडीको जस्तै राजुको सपना पनि जिम्न्यास्टिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्नु नै हो। राष्ट्रिय स्तरमा पाएको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउने सोच राख्नु खेलाडीका लागि आवश्यक पनि छ।
तर सफल खेलाडी हुँदा हुँदै पनि राजुले त्यो अवसर पनि पाएनन्। २०७४ मा राजुले थाइल्यान्डमा हुने एसियन जिम्न्यास्टिक च्याम्पियनसिप खेल्ने अवसर पाउँदै थिए। यो अवसर उनको लागि खेलकुदमा लागेपछि पहिलो थियो। उनले जिम्न्यास्टिक खेल्न थालेको दशक पार गर्दासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नै पाएका थिएनन्।
तर यही बेला नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव आयो। नेपाल जिम्न्यास्टिक संघमा मुख्य प्रशिक्षक थिए राजेश्वरमान स्थापित। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट विद्यासुन्दर शाक्य उठ्दै गर्दा उनको विशेष सहयोगी थिए स्थापित।
उनै स्थापित हुन्, जो मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी भूलेर राजनीतिक झण्डा बोकेर आलोचित भइरहन्छन्। उनी विद्यासुन्दरलाई चुनावमा सघाउन हिँड्न थालेपछि नजिकै आइरहेको प्रतियोगिता खेल्न नपाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता राजुलाई पर्न थालेको थियो।
गुनासो गर्दै राजु भन्छन्, ‘मुख्य प्रशिक्षकलाई नै मतलब छैन। अरुले झन के वास्ता गर्थे र! जिन्दगीमा बल्ल पाएको खेल्ने अवसर पनि गुम्यो। धेरै पटक प्रयास गरेँ। धेरै पटक भनेँ यो मेरो पहिलो अवसर हो, गुमाउनु हुँदैन। तर कसैले सुनेन मेरो कुरा।’
‘धेरै दुःख लाग्यो। यतिका वर्ष मेहेनत गरेँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाइनँ। यो भन्दा अभागी अरु के हुन्छ र?’, राजु भन्छन्, ‘जिम्न्यास्टिकलाई राम्रो गर्न कि त मुख्य प्रशिक्षकले राजीनामा दिनु पर्यो कि राजनीतिमा लागेर खेलको वेवास्ता गरिरहनु भएन।’
च्याम्पियनका पाँच प्रतियोगिता
राजु त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले आफ्नो अथाह प्रतिभा प्रमाणित गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो १४ वर्षे जिम्न्यास्टिक खेल जीवनमा जम्मा पाँच वटा प्रतियोगिता मात्रै खेल्न पाए। अचम्म लाग्दो सत्य यही हो।
प्रतियोगिता धेरै भएर राजुले मात्र पाँच प्रतियोगिता खेलेका होइनन्। उनले जिम्न्यास्टिक खेल्न थालेदेखि नै देशमा भएका जम्मा प्रतियोगिता पाँच नै हुन्।
भलिबलमा वर्षमा १२-१३ भन्दा बढी राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ। क्रिकेट र फुटबलको कुरै नगरौं। पौडीदेखि अन्य मार्सल आर्ट खेलका प्रतियोगिताहरु पनि भइरहेका हुन्छन्। तर जिम्न्यास्टिक यस्तो खेल हो, जहाँ खेलाडीले एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पनि ४-५ वर्ष कुर्नु पर्छ।
‘जिम्न्यास्टिकमा नै लागेर यतिका वर्षहरु बित्यो। तर अहिलेसम्म मैले पाँच वटा मात्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छु। भएकै प्रतियोगिता त्यति नै हो।’
२०६८ सालमा भएको छैठौँ राष्ट्रिय खेलकुद, पूर्वाञ्चलमा भएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद, आठौं राष्ट्रिय खेलकुद, प्रथम लुम्बिनी जिम्न्यास्टिक च्याम्पियनसिप र एनआइसी फाउन्डेसन राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले खेले।
प्रतिस्पर्धामा उनी सधैँ अब्बल। उनलाई उछिन्ने राष्ट्रिय स्तरमा कोही भएनन्। जसले उनी लगातार च्याम्पियन भइरहे। ‘म तीन पटक राष्ट्रिय च्याम्पियन भएको छु। सातौं, आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र पहिलो लुम्बिनी राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा च्याम्पियन बने’, उनी भन्छन्।
‘टुलुटुल हेरेर बसिरहेँ’
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता नेपालमा नै भयो। जहाँ नेपालले ५१ स्वर्णसहित कुल २०६ पदक जित्यो। तर जिम्न्यास्टिकका खेलाडी भने अरु खेलाडीले स्वर्ण जितेको र नेपाली झण्डा फहराएको हेर्नबाहेक केही गर्न सकेनन्।
माहोल यस्तो थियो कि, आफू पनि खेल्न पाए, देशको झण्डा बोक्न पाए कस्तो हुन्थ्यो? अरुले स्वर्ण पदक जित्दा पक्कै म पनि जित्थेँ होला भन्ने भान राजुलाई भइरह्यो। तर सरकारले जिम्न्यास्टिक खेललाई खेल उत्सवमा पनि अपहेलना गर्‍यो।
‘दुःख त धेरै लाग्दोरहेछ। दक्षिण एसियाको कुम्भ मेलाको रुपमा रहेको साग खेलकुद प्रतियोगिता आफ्नै आँगनमा हुँदा म भने दर्शकदिर्घामै थिएँ। मैदानमा हुनुपर्ने खेलाडी दर्शक बनिरहँदा को खुसी हुन्छ?’, प्रश्न गर्दै राजु भन्छन्।
ओलम्पिकदेखि एसियन गेम्समा पनि जिम्न्यास्टिक नियमित रुपमा खेलाइने खेल हो। तर दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म प्रवेश गराइएको छैन। आफ्नै देशमा हुँदा त जिम्न्यास्टिकलाई पनि समावेश गर्लान् भन्ने राजुलाई लागेको थियो। तर विडम्बना यतिसम्म भयो कि जिम्न्यास्टिक खेल संघ आफैले पनि १३औं सागमा समावेशका लागि पहल गरेन। यहि कुराले पनि राजुको मन बढी पिरोलिएको छ।
चार वर्षको उमेरदेखि नै जिम्न्यास्टिक सिक्न थालेका राजुलाई आफ्नो खेल जीवनमा कहिल्यै यस्तो समय आउँछ भनेर लागेको थिएन। तर भयो। २०७४ देखि जिम्न्यास्टिकका खेलाडीले अभ्यास समेत गर्न पाएका छैनन्।
बेवारिसे भएको मात्र हो, अवसर छ
जिम्न्यास्टिक खेलमा अहिले राष्ट्रिय खेलाडीहरु कति होलान्? यो तथ्याङ्क न प्रशिक्षकसँग छ, न खेल संघसँग। राजुका अनुसार अहिले करिब १२ जना मात्रै राष्ट्रिय खेलाडी जिम्न्यास्टिकमै रहिरहेका छन्। अरु खेलाडी कता गए त?
भोको पेटले खेल र खेलाडीलाई बचाइ राख्दैन। लामो समयसम्म अभ्यासदेखि प्रतियोगितासमेत नहुँदा पेट पाल्नकै लागि भए पनि जिम्न्यास्टिक छाड्ने खेलाडीको लर्को उत्तिकै छ।
जिम्न्यास्टिक खेलमा अवसर नभएको पनि होइन। छ। तर यो खेललाई अगाडि बढाउने संघ र राज्यबाट बेवारिसे बन्दा यसले दुर्गती भोग्नु परेको स्थापित सत्य हो।
जिम्न्यास्टिक खेलको विकास गर्न न सरकारको आँखा पुगेको छ न संघ नै लागिपरेको छ। संघका पदाधिकारी आफ्नै भागबन्डामा लाग्दा खेलाडीका लागि आफ्नै खेल पनि विरानो लाग्दै छ।
राजु भन्छन्, ‘जिम्न्यास्टिकमा स्कोप धेरै राम्रो छ। यो खेललाई कसैले बुझेका छैनन्। भएका खेलाडीहरु पनि पलायन हुने तरखरमा छन्। धेरै खेलाडी पलायन भइसके पनि। जिम्न्यास्टिक खेल भनेको जुनसुकै खेलमा पनि मिल्न जान्छ। यो अर्थमा कि जिम्न्यास्टिक अन्य खेलका खेलाडीलाई पनि आवश्यक पर्छ।’
‘पहिलो कुरा त अभ्यास गर्न राम्रो हल हुनु पर्‍यो। अहिले हामीसँग एउटा पनि हल छैन। प्रशिक्षकहरुलाई पनि तालिम दिँदै लानु पर्छ। हरेक चार वर्षमा जिम्न्यास्टिकको नियम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। संघले खेल र खेलाडीको लागि काम गर्नु पर्‍यो।’
अभ्यास नभएको तीन वर्ष भयो
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भवनमै थियो, जिम्न्यास्टिकको प्रशिक्षण केन्द्र। सबै खेलाडीले त्यहीँ अभ्यास गर्थे। दिनमा दुई पटक अभ्यास हुन्थ्यो। बिहान बेलुका। खेलाडीहरु उर्जाका साथ अभ्यास गरिहेका हुन्थे। तर अहिले त्यही त्रिपुरेश्वर जिम्न्यास्टिकका लागि विरानो बनेको छ।
२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण राखेप भवनमा क्षती पुग्यो। जिम्न्यास्टिक हल पूरै बन्द भयो। त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात २०७४ मा भवन निर्माण कार्य सुरु भयो। यही बेलादेखि जिम्न्यास्टिकका खेलाडीले अभ्यास समय पाउन छाडे।
संघ आफ्नै विवादमा। प्रशिक्षक नेताको चम्चा बने, खेलाडी बेवारिसे। जसोतसो खेलाडीले आफ्नै बलबुतामा नेपालगञ्जमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता त खेले। तर त्यसपछिका दिनहरु भने झनै विरक्त लाग्दो बन्यो।
‘आफ्नै हल हुँदा धेरै खेलाडी थिए। तर अहिले त्यस्तो छैन। जिम्न्यास्टिक खेल नहुँदा कोही नाच त कोही चलचित्र क्षेत्रतिर लागेका छन्। कोही भने पेशा नै बदल्दै अन्त्यै भविष्य खोजिरहेका छन्’ राजु सुनाउँछन्।
पुर्ख्यौली घर काभ्रे पाँचखाल भएका राजु काठमाडौंमै जन्मिए। त्यहीँ हुर्किए। दाजु महेश राई जिम्न्यास्टिक खेलाडी भएको हुँदा भाइ राजुले पनि त्यही बाटो समाते। त्यसरी नै जिम्न्यास्टिकतर्फ उनको मोह बढेको थियो। तर अहिले उनलाई नाम मात्रको जिम्न्यास्टिक खेल लाग्छ।
च्याम्पियन खेलाडी राजुकै दृष्टिकोणमा जिम्न्यास्टिक खेललाई विकास गर्न के गर्नु पर्छ? उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त अभ्यास गर्न राम्रो हल हुनु पर्‍यो। अहिले हामीसँग एउटा पनि हल छैन। प्रशिक्षकहरुलाई पनि तालिम दिँदै लानु पर्छ। हरेक चार वर्षमा जिम्न्यास्टिकको नियम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। संघले खेल र खेलाडीको लागि काम गर्नु पर्‍यो।’
अब राजु राईलाई जिम्न्यास्टिक खेलाडी मात्रै भन्दा अन्याय हुन्छ। अब उनको नाममा शारीरिक सुगठन खेल पनि जोडिएर आउँछ।
शारीरिक सुगठनलाई उनले अघि बढाएको धेरै वर्ष भएको छैन। जिम्न्यास्टिक खेलकुद गतिविधि नहुँदा उनले अर्को पाटोको रुपमा यो खेललाई अंगालेका हुन्। राजु शारीरिक सुगठनमा लागे भने अन्य धेरै खेलाडी छन्, जो जिम्न्यास्टिक नै त्यागेर अन्य पेशामा जोडिए।
राजु भने आफू जिम्न्यास्टिक खेल नछाड्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘जिम्न्यास्टिकलाई आधार बनाएर शारीरिक सुगठनलाई अगाडि बढाउँछु।’
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको लकडाउनसँगै विभिन्न संकटसँग जुधिरहेका राजुले शारीरिक सुगठन खेलमा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् भने एक राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न भ्याए।
काठमाडौंमै भएको शारीरिक सुगठनको दक्षिण एसियाली प्रतियोगिताको फिटनेश फिजिक्समा उनी दोस्रो भएका थिए। त्यस्तै, गत डिसेम्बरमा थाइल्यान्डमा भएको एसिया प्यासिफिकमा उनी पाँचौ स्थानमा थिए। जहाँ ६० राष्ट्रको सहभागिता थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनले मिस्टर हिमालयन शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिप खेलेका छन्। यो प्रतियोगितामा पनि उनी दोस्रो भए।
जिम्न्यास्टिक खेलमा लागेर आफूलाई पछुतो नै भने नभएको राजु बताउँछन्। ‘मलाई पश्चाताप नै त छैन। जिम्न्यास्टिकले गर्दा बडिविल्डिङमा राम्रो गर्न सकेँ। यो मेरो विषयमा भयो तर अन्य धेरै खेलाडी छन् जो जिम्न्यास्टिकमै लागेर पछुताएका छन्।’